In kasta oo aan ku jirno xilli fasax ah, xanta la xiriirta iPhone 7 waa amarka maalinta. Jaangooyooyinkii ugu horreeyay ee loo maleeyay ee iPhone 7 sheegashada waxay noqon doontaa 18% ka dhaqso badan iPhone 6s, fiidiyow ayaa na tusaya male iPhone 7 iyada oo aan lahayn qalabka dhegaha, laakiin sidoo kale badhanka carrab la 'ayaa sidoo kale ku baabi'i doona moodooyinka cusub. Haddii aan ka hadalno batteriga, waxay umuuqataa iyadoo laga saarayo isku xirnaanta jaakada, Apple wuxuu ballaarin karaa mAh ee batteriga iPhone 7, kaas oo ka weynaan lahaa 14%. La xiriirta iPhone 7 waxaan sidoo kale awoodnay inaan aragno sawirro cusub sidii ay ahaan lahaayeen qalabka 'EarPods' cusub oo wata danab. In kasta oo dhinaca kale Apple ay la wadaagi karto iPhone-ka cusub AirPods, samaacado sameecado leh oo aan lahayn nooc fiilo ah.
Haddii aan ka hadalno Apple guud ahaan, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino wuxuu damacsan yahay inuu xarun cusub oo R&D ka furo Grenoble, France, ee hagaajinta hawlgalka iyo ku dar shaqooyin dheeri ah kamaradda iPhone iyo iPad. Apple ayaa hal milyan oo doolar ugu deeqday NGO aan dawli ahayn oo ku yaal Shiinaha si looga caawiyo howlaha samatabixinta iyo dib u dhiska roobabkii dalka saameeyay awgeed. Sida la yaab leh sida ay u dhawaaqi karto Dukaamada Apple ee Ruushka ayaan lahayn adeeg lagu hagaajiyo qalabka Aan daboolin damaanada, sida bedelida shaashadda, wax dhowaan isbadalaya cabasho ka timid adeegsade. Isagoo ka hadlaya Apple Watch, sida ku cad daraasadda JD Power, Smartwatch-ka Apple waa midka bixiya qanacsanaanta ugu badan ee macaamiisha.
Sababtoo ah guusha uu Pokémon GO haysto adduunka oo dhan, wararka iPhone-ka waxaan sidoo kale uga hadalnay tan cusub Ciyaarta Nintendo ee ugu dambeyn laga heli karo Spain iyo wadamada kale ee Yurub ilaa jimcihii la soo dhaafay. Dhibaatada ka jirta barnaamijka iOS ee saameeyay dhammaan adeegsadayaasha isticmaalay koontadooda Google si ay ugu raaxaystaan ​​adeegga. Dhibaatadan la siiyay marin buuxa ee koontadayada Google halkii aad ka bixin lahayd kaliya macluumaadka ku saabsan boostadayada iyo aqoonsigeenna. Markii la bilaabay Ciyaartan ayaa siineysa lacag ka badan tan Apple shirkadda Nintendo lafteeda si toos ah, iyada oo aan la tixgelin in shirkadda Pokemon ay sidoo kale ka timid shirkadda Japan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Ugu fiican usbuuca ee ku jira Actualidad iPhone
IPhone 7 wuxuu ka soo muuqanayaa fiidiyow cusub xaglaha oo dhan